अस्ट्रेलियाबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ? ट्रान्जिट... :: हेमन्त काफ्ले :: Setopati
अस्ट्रेलियाबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ? ट्रान्जिट नबुझ्दा दुःख पाउनुहोला!
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, मंसिर २
अनलाइनमार्फत टिकट काटेर आइतबार सिड्नी विमानस्थल पुगेकी नेपाली चेली कासी वस्ती विमानस्थलमै रोकिइन्।
१२ सय डलर हालेर किनेको उनको टिकट खेर मात्रै गएन, उनले बुनेको योजना र कल्पना पनि चकनाचुर भए। उनलाई नेपाली राहदानी र यसको अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु परेको हो।
सिड्नीदेखि हङकङसम्म क्वान्टास र हङकङदेखि अर्को हवाइसेवामार्फत नेपाल जाने उनको योजनामा नेपाली पासपोर्ट तगारो बन्यो। विमानस्थलमा एअरलाइन्सका कर्मचारीले नेपाली पासपोर्टलाई स्थानीय विमानबाहेक अरुमा सवार हुँदा भिषा अनिवार्य रहेको बताएपछि उनी छाँगाबाट खसेझैँ भइन्।
कासीलाई अनलाइन टिकट काट्दा यो कुरोको पत्तै थिएन। योजना बमोजिम उड्न नपाएकी कासीले निराश हुँदै भनिन् ‘मैले त दुख पाएँ, अरुले नपाउन्।’
हङकङको घरेलू हवाइ सेवा बाहेक अन्य कुनै पनि एअरलाइन्स प्रयोग गरेर हङकङ ट्रान्जिट बनाउने नेपालीलाई भिषा आवश्यक रहन्छ।
धेरै नेपालीले विमानस्थलको प्रयोग र आफ्नो पासपोर्टको अधिकार क्षेत्रका बारेमा जानकारी नपाउँदा धेरैपटक धोका खाएका उदाहरण छन्।
‘अहिले हङकङकै घरेलू विमान क्याथे प्यासेफिक र ड्रागन एअरको कनेक्ट टिकट लिनेलाई भने १२ घन्टाको ट्रान्जिटसम्म भिसा आवश्यक हुँदैन’ सिड्नीमा सांग्रिला ट्राभल चलाउँदै आएका सुरेन्द्र सापकोटाले भने, ‘तर त्यो भन्दा बढी भएमा भने भिषा आवश्यक रहन्छ।’
टिकट काट्दा अनलाइनमा यस विषयमा कुनै जानकारी हुँदैन। ‘ट्राभल एजेन्टको काम टिकट बेच्ने हो बेचिदिन्छन्, तर पासपोर्टधारीले आफूसँग रहेको पासपोर्ट र त्यसको उपयोग अधिकारको बारेमा आफै जानकारी लिनु पर्दछ’ सापकोटाले भने।
त्यस्तै अस्ट्रेलियाबाट नेपाल जाने महत्वपूर्ण रुटमध्ये सिंगापुर ट्रान्जिट नेपालीहरुको लागि सहज र समस्यारहित ट्रान्जिट हो। यहाँ नेपालीले अनएराइभल भिषा पाउने भएकोले कुनै पनि समस्याबाट गुज्रनु पर्दैन।
चाइना साउदर्नमार्फत ग्वान्जाओ ट्रान्जिट नेपालीको सहजतका लागि भरपर्दो मानिँदै आएको छ। चालीस किलोसम्मको लगेज लान पाइने कारण पनि यो सबैको रोजाइमा देखिन्छ।
यस्तै चीनका अन्य दुई रुटमा पनि झन्झटिलो प्रकृया रहेको यात्रु बताउँछन्। एअर चाइनाबाट छेन्दु ट्रान्जिट बनाउनेहरुको लागि सामानको पुनः जाँंचबुझ हुने हुँदा झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने ट्राभल एजेन्टहरु बताउँछन्।
चाइना इस्टर्नबाट कुन्मिन ट्रान्जिट बनाउनेहरुको लागि पनि लगेज पुनः जाँच गराउनुपर्ने झन्झट रहन्छ। स्मरण रहोस्, प्रक्रियागत झन्झटका बाबजुत यी दुवै एअरलाइन्सको हवाइ टिकट मूल्य केही सस्तो छ।
अब रहयो, भारतको नयाँ दिल्ली ट्रान्जिट। सम्वन्धित निकाय र विमानस्थलको बारेमा जानकारी नहुँदा यो ट्रान्जिटमा पनि यात्रुले समस्या भोग्ने गरेको एभेरेष्ट ट्राभल एन्ड टुर्सका इर्शाद अहमद बताउँछन्।
‘अस्ट्रेलियाबाट यो ट्रान्जिट हुँदै नेपाल जाने यात्रुलाई त्यस्तो खासै सोधपुछ र समस्या हुँदैन तर भारत ओर्लनेहरुको सवालमा भने सोधपुछ हुने गरेको हामीले पनि थाहा पाएका छौं’ एनआरएनका युवा संयोजक समेत रहेका इर्शादले भने।
भारतको दिल्लीबाट नेपाली पासपोर्टधारीलाई अस्ट्रेलिया आउन भने रोक लगाइएको इर्शादले सुनाए। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र भयो भने मात्र दिल्लीबाट अस्ट्रेलिया उड्न पाइन्छ। यो जानकारी नहुँदा भारत घुमेर अस्ट्रेलिया फर्कन खोज्ने नेपालीहरु समस्यामा परेको उदाहरण रहेको युवा संयोजक इर्शादले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २, २०७६, ०७:५१:००
अस्ट्रेलियामाथि साइबर आक्रमण बढेको प्रधानमन्त्री मोरिसनको भनाइ, शंका चीनमाथि